Home Wararka Xog Cusub: Shabaab iyo Daacish “ Gaalo Waa Jabtay mar Haddii Drones...
Xog Cusub: Shabaab iyo Daacish “ Gaalo Waa Jabtay mar Haddii Drones aan Helnay” iyo Cabsi Guud oo jirta.
Waxaa iska soo dabadhaceyso khater ay dauuradaha droneska la yimaadeen dalka gudihiisa, iyadoo xataa uu jiro welwel weyn oo ka jira xaruunta Xalane, kadib markii la ogaaday inay dhici karto inay jirto shixnad kale oo drones ah oo u gudubtay gacanta Dacish iyo Shabaab.
Xil. Zakariya oo tagay magaalada Boosaaso ayaa waxaa suuragal ah inuu horay u geeyey dhowr xabbo oo drones ah, halkaasna ay Shabaab ka qaateen, iyadoo NISA iyo hogaankeeda ay ogaayeen shixnadahaas.
Khudbadaha ay jeedinayeen labadii maalmood ee tagtay madaxda Shabaab iyo Dacish-ta Somaliya waxaa ka mid ahaa “Gaalo waa Jabtay” oo loola jeeday waxaa gacanta noo soo galay hub casri ah oo aan u baahneyn inuu qof dabmbe oo Muslima ah uu iska kaaya qarxiyo ama uu naga dhinto.
Xildhibaan Zakariya marnaba ma jecleyn beesha Caalamka iyo Xalane oo waxaa uu ku baaqi jiray gaalo ayaan na haysata ama shisheeye ayaa dalkeenna maamula, taas oo ah inuu diyaar u yahay inuu fududeeyo wax kasta oo Xalane lagu gaari karo.
Farmajo ayaa isagana ay soo baxday inuu raalli ka ahaa in la keeno dayuuradahaan si haddii uu ka faa’ideysan karo uu ugu isticmaalo kooxaha ka soo horjeeda xukunkiisa sida mucaaridka iyo ciidankii badbaado qaran, kuwaas oo ay Khasab tahay inay haddaba ka digtoonaadaan oo shimbirtii soo kormartaaba ka shakiyaan. Xil. Zakariya waxaa uu yiri “ Markii aan Farmajo la hadlay in la soo daayo drones qaliga ah oo jooga malaayiin doolar si loogu waraabiyo beero” Waxaa uu igu yiri “ Naga dhaaf waxaa soo galay galay Mareykanka”, taas oo macnaheedu yahay waa kuu sii deyn lahaa haddii aysan sidaas u kashifmi lahayn.
Tan yaabka leh waa beer Somaliya ku taalla oo sannadka oo dhan ay ka soo baxayaan wax la ka yar $20,000 ayaa waxaa loo soo ibinayaa Drones jooga malaayiin Doller, sow maaha yaa dabbaal ah oo duurka loo diraa?.
Shalay waxaa drones lagu qarxiyey guriga uu deggan yahay RW Ciraaq, Mustafa Al Kadhimi inkasta oo uu ka badbaaday, taas oo muujineysa inay yihiin aalad khater ah oo dalka soo gashay.
Sidaas darted waxaa muuqata ina khaterta oo markii hore Somalida ku ekeyd inay hadda gaari doonto beesha Caalamka oo in muddo ah ka caga jiideysay inay Farmajo toos uga soo horjeestaan, kuwaas oo isticmaalayey erayo qiiq isku qaris iyo diblomasiyad ku sheeg ah. Wey og yihiin Farmajo maaha qof xisaabtama oo qiimeyn kara khaterta ay leeyihiin falalka uu amaryo in la sameeyo maadaama u yahay laba miirre (bipolar), waxaa kaliya oo uu yaqaannaa waa inuu cabsado sidii ay Ugandha xoog uga qaadday 2012 markii uu diiday inuu xukunka wareejiyo.
Haddaba Beesha Caalamka, Midowga Murashixiinta, iyo Ciidanka Badbaado qaran waa inaysan sugin inta la rakibayo oo laga soo buuxin doono qaraxyo droneska la sheegayo inay shabaab iyo daacish u gudbeen, haddii kale waxaa ka dhici doonta inteen ka baxaa meel Allah. Farmajo waa in madaxdtooyada xoog looga saaraa inta uusan yeelan awood aan la horjoogsan Karin oo lagu baaba’o.
Waxaa jirta cabsi guud oo droneska ku aadan oo dalka oo dhan ah laga qaaday.